दुखद खबर : दुनियाँकै मनमा बसेका नेपाली डाक्टरले आफै जी’वन त्या’गे – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/दुखद खबर : दुनियाँकै मनमा बसेका नेपाली डाक्टरले आफै जी’वन त्या’गे
भारतको मेदान्ता द मेडिसिटी अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण विभागमा कार्यरत नेपाली चिकित्सकले जी’वन त्या’ग गरेका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यम दैनिक ट्रिब्युनका अनुसार ३९ वर्षीय नेपाली डा. सुजितकुमार साहले आफू बस्ने गरेको अपार्टमेन्टको आठौं तलाबाट त’ल ज’मिनमा जी’वन त्या’ग गरेका हुन् ।
समाचारमा बताइएअनुसार मंगलबार दिउँसो करिब तीन बजे उनले जी’वन त्या’ग गरेका हुन् । उनी गुडगाउँको अपार्टमेन्टको आठौं तलामा भाडामा बस्दै आएका थिए । उनले परिवारिक कलहको कारण जी’वन त्या’ग गरेको हुन सक्ने समाचारमा बताइएको छ । मृतक साह घरमा एक्लै बस्दै आएका थिए । उनकी पत्नी पनि डाक्टर हुन् र उनी अहिले पश्चिम बंगालमा काम गर्छिन् । उनीहरुकी ६ वर्षीया छोरी पनि आमासँगै पश्चिम बंगालमा नै बस्दै आएकी छिन् । घटना भएको थाहा पाएसँगै सुरक्षा गार्डले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । तत्काल घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले अस्पताल पुर्‍याउँदा साहलाई मृ’त
घोषणा गरिएको थियो । प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यो जी’वन त्या’ग भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनास्थलमा एक त्यस्तो प्र’माणको नो’ट पनि भेटिएको छ । जसमा उनले पारिवारिक कारणले जी’वन त्या’ग गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्नी छोरीको भविष्यप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको समाचारमा जनाइएको छ । उनी नेपाल भारत दुबैमा रहेका दुनियाँकै मनमा बसेका थिए । सबैको जानकारीको सेयर गर्नुहोस !***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****